WSL Distribution Switcher, chirongwa chinotibvumidza kuunza chero distro kuWindows 10 | Linux Vakapindwa muropa
Iri 2016 richava gore iro Ubuntu, kugoverwa kweGnu / Linux uye Windows 10 vakabatana muWindows 10. Izvi zvinozivikanwa neMicrosoft seLinux Subsystem chirongwa chediki chinogona kuchinjwa kana zvirinani vashandisi vakawanda vanozvivimbisa.
Kunyangwe Bash iri mune zvakawanda zvakagoverwa, chokwadi ndechekuti kugovera kwega kwega kunozviitira nenzira kwayo. Kana iri yeMicrosoft, pachinzvimbo chekuisa nenzira yakajairika, kuteedzera Ubuntu tsika vazhinji vashandisi veLinux vanodzokera kuWindows vanopotsa yavo terminal, iyo terminal yekuparadzira kwavo.
Zvinotaridza kuti izvi zvichazopera nekuti chirongwa chakazvarwa chinoedza kuchinja izvi. Chirongwa ichi chinonzi WSL Kugovera Shandura. WSL Distribution Switcher chirongwa chinoedza kugadzirisa Windows Linux Subsystem uye nekuchinjira iyo Fedora, Debian, Arch Linux terminal, nezvimwe ... nemirairo yayo uye zvigadziriso. Chii chimwe tinogona kuva nemamiriro eLinux system saka tinogona kutamba kana tichiisa mashandisiro uye mamwe magwaro.
WSL Distribution Switcher inotibvumidza kuve neArch Linux kana Fedora terminal mukati Windows 10
Ichi chishandiso chine nzvimbo yeGitHub kubva kwatichakwanisa kudhawunirodha mafaera echirongwa uye nhanho dzekushandura iyo Linux subsystem. Chinhu icho panguva ino ini handikurudzire kushandisa mune zvigadzirwa zvekugadzira nekuti haina kupukutwa zvakanyanya uye inogona kukonzera matambudziko akakomba muWindows 10. Haisi iyo nzira yakakodzera yevanonyanya kufarira sezvo ichida maraibhurari akati wandei uye zvinyorwa zvinofanirwa kuitiswa kumisikidza uye kugadzirisa kweiyo nyowani sisitimu.
Ini pachangu ndinofunga chirongwa chinonakidza, asi pane imwe sarudzo iri nani padambudziko iri: gadza uye shandisa kugovera kwatinoda. Izvo zvirinyore kushandisa uye zvakapusa pane kuchinjana mashandiro ehurongwa uye masystems Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » WSL Distribution Switcher, chirongwa chinotibvumidza kuunza chero distro kuWindows 10
Isa zvimwe kushambadzira pane peji, kuchine maburi.
Shandisa Adblock kana Ublock Chibviro.
@JuanPe ini handi kunyepedze kuti havawani mari kana iwe ukashanyira peji rako uye ndosaka ndisingashandisi AdBlock, asi inopedzisira yave inoparadza. Ivo vane popups paunopinda neako nharembozha uye vhidhiyo kushambadza kunotamba pano futi. Izvo zvinoita senge isiri peji kwandiri, asi ndinoziva vamwe vanoshandisa mashoma mabhenji andisinganyunyuti nawo.